Ukuqhathanisa i-Leh Ladakh Tour | Shayela @ + 91-993.702.7574 Ukubhuka.
I-Mesmerizing Leh Ladakh Tour
Izwe lokudlula okuphezulu, elisendaweni enhle kakhulu yeJammu neKashmir, ebhekwa njengendawo yokuvakasha ehamba phambili, i-Ladakh yizwe eligcwele ubuhle bemvelo kanye ne-mystique. With the Lem Ladakh Tour Mesmerizing uhlangabezana nemibala ehlobo ehlobo kanye ne-snowy wonderland in the winters. Ngenxa yenkambiso yayo eyingqayizivele isifunda sihlala ezindlini eziningana ezihlonishwayo nezingcwele. Vakashela ezinye zamachibi ezimangalisayo kakhulu, izintaba, izigodi, nezindawo zokukhulekela kulo Mdlalo ohambelanayo weLeh Ladakh. Kusukela emadolobheni amakhulu amakhulu nezintaba zezinyanga ezihlala emanzini emilingo, uLadakh uyaqiniseka ukuthi uzothatha umoya wakho. Njengendawo eya kuyo, I-Ladakh ligcwele zonke izinto ezingabonakala; kusukela emachibi amachitha aluhlaza kuze kube yilapho kuhlwanyela amahlumela aluhlaza ngisho nemifula eyomile futhi eyomile yenza lo mhlaba ogqamile ube khona lapho uhamba khona ohlwini lwabakhambi, futhi yisona isizathu sokuthi akukho muntu okufanele alahlekelwe ithuba lokuvakashela leli Pharadesi . Ukuthatha i-Leh Ladakh Tour eMesmerizing uzoziphathisa ngobuhle obungenakuqhathaniswa obungabhekana nakho uma uhamba lapho. Ukuthula nokulondeka kwemvelo kuhlale kuwuphawu lokucindezeleka ekuphileni kwansuku zonke. Thatha i-Mesmerizing Leh Ladakh Tour bese ulahlekelwa wena ebuhleni obuhle beleli zwekazi.
Ama-04 NIGHTS AHLELA NGESIKHATHI NO-01 NIGHT STAY E-NUBRA VALLEY
Uhlelo lwe-05 Nights | Ikhodi Yokuvakasha: 196
Lapho ufika esikhumulweni sezindiza seLeh, uzobe uthatha uphinde uthunyelwe ehhotela. Ngena ku-Hotel. Ukuphumula kosuku kuyisimiso sokungenelela. Kusihlwa ungavakashela i-shanti stupa, i-Leh Palace. Ngobusuku ehhotela.
Ngemuva kokudla kwasekuseni ukuvakashela i-25km entshonalanga yeLeh Sangam yemifula yase-Indus & Zanskar - imifula emibili emikhulu eLadakh eyaziwa ngokuba ngumfula uRafting, iMagnetic Hill - okusolakala ukuthi kunezindlela zokulwa nezidakamizwa ne-Hall of Fame Museum lapho umuntu ebona khona izinkumbulo yezimpi ezenzeka eLadakh njengempi ye-1971, impi ye-1962 ne-Kargil empini, i-Pathar Sahb Gurdwara ne-Spitk monastery (i-Kali mata mandir) ne-Stok Palace museum. Ukulala ebusuku ehhotela eLeh.
ULANGA 03: LEH - NUBRA VALLEY (APRX 125 KM / 5HRS)
Ngemuva kokungena ngesidlo sasekuseni ukuya eNubra Valley ngeKhardungla Pass (I-Highest Motorable Road e-World, i-18,380 ft) Fika e-Hunder nge-ntambama. Isidlo eKamp, usuku lonke lukhululekile ukuhlola i-Deskit, i-Hunder Villages futhi ujabulele ikamela le-Safari ngekamela le-Bacterian (double hump) ku-Sand Dunes. Ukulala ebusuku ku-Nubra Valley.
DAY 04: UNUBRA VALLEY - LEH
Ngemuva kokudla kwasekuseni uvakashele i-Deskit Monastery, lapho ungaba nombono omuhle kakhulu weNubra Valley bese ubuyela emuva kuLeh ngomzila ofanayo, uwela i-Khardungla Pass. Ubusuku buhlale ehhotela eLeh.
DAY 05: LEH - PANGONG LAKE (EXCURSION) -LEH (APRX 158 KM / 5HRS)
Ngemuva kokudla kwasekuseni uyeke e-Pangong Lake 14,500 ft, ​​ngokusebenzisa i-Changla Pass 17,350 ft. (Umzila wesithathu we-Highest Motorable emhlabeni) Fika ePangong Lake futhi ujabulele umbala oguqula i-lake futhi uvakashele ukudubula kwe-Bollywood Movie 3 Idiot noJab Tak Hai Jaan. I-Pangong Lake - ichibi eliphakeme kakhulu kunazozonke e-Himalayas ene-66% yalo e-China. I-Post Lunch ibuyela emuva kuLeh. Ngobusuku ehhotela.
Ukuhamba ekuseni ekuseni ku-airport yeLeh ukugibela indiza emuva endaweni oya kuyo. Uhambo luphela ngezikhumbuzo ezimnandi nezingenakulibaleka zikaLadakh.